ပေါက်ကွဲမှုက၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တစ်ဦးရုတ်တရက်ဖိအားပြုပြင်တဲ့ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ကိရိယာ၏လျင်မြန်စွာတိုးချဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒြပ်စင်ဒြပ်ပေါင်းများ၏ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုစက်မှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဒါမှမဟုတ် subatomic / အနုမြူဗုံးအဆင့်တွင်နျူကလီးယားတုံ့ပြန်မှုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဓာတုတုံ့ပြန်မှု: ဒါဟာအရာသုံးခုထဲကတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်။
ဥက္ကာမြေကြီးတပြင်ရိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအဆိုပါပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုစက်မှုပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါနျူကလီးယားထိပ်ဖူးပေါက်ကွဲမှုရုတ်တရက်ပုန်ကန်တတ်သောအမျိုးဖက်ရှင်အတွက်ဆိတ်ကွယ်ရာကွဲ plutonium ကဲ့သို့ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းဥစ္စာ, ၏နျူကလိယ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါပေမယ့်လူ့သမိုင်းမှာပေါက်ကွဲအသုံးအများဆုံးပုံစံဖြစ်ကြောင်းပေါက်ကွဲ, စီးပွားဖြစ် / ဖန်တီးမှုနှင့်အဖျက်အကျိုးသက်ရောက်မှုဘို့နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုဓာတုဖြစ်ပါတယ်။ ပေးထားသောပေါက်ကွဲ၏အစွမ်းသတ္တိကိုချဲ့ထွင်မှုနှုန်းက detonation စဉ်အတွင်းထားပါတယ်ကြောင်းတိုင်းတာသည်။
Black က Powder
ဒါဟာပထမဦးဆုံးပေါက်ကွဲအနက်ရောင်အမှုန့်ကိုတီထွင်တဲ့သူမသိနိုင်ပါဘူး။ ထို့အပြင်ယမ်းမှုန်အဖြစ်လူသိများအမဲရောင်အမှုန့်, saltpeter (ပိုတက်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်), ဆာလဖာနှင့်မီးသွေး (ကာဗွန်) ၏အရောအနှောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနဝမရာစုအတွင်းလှည့်ပတ်တရုတ်ဝေါဟာရနှင့် 13 ရာစုအကုန်တွင်အာရှနှင့်ဥရောပတစ်လျှောက်လုံးကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာသာမန်မီးရှူးမီးပန်းများနှင့်အချက်ပြမှုများအတွက်အဖြစ်သတ္တုတွင်းနှင့်အဆောက်အဦစစ်ဆင်ရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Black ကအမှုန့်ပဲ့ထိန်းတပ် propellant ၏ရှေးအကျဆုံးပုံစံနှင့်အစောပိုင်းနှုတျသီး-type အမျိုးအစားသေနတ်နှင့်အခြားအမြောက်တပ်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအသုံးပြုခဲ့သည်။ 1831 ခုနှစ်တွင်ဝီလျံ Bickford အင်္ဂလိပ်သားရေကုန်သည်ကိုပထမဦးဆုံးဘေးကင်းလုံခြုံရေးဖျူးတီထွင်ခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးဖျူးအသုံးပြုခြင်းအနက်ရောင်အမှုန့်ပေါက်ကွဲပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ဘေးကင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သို့သော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနက်ရောင်အမှုန့်ကအမြင့်ဆုံးပေါက်ကွဲအားဖြင့်၎င်း, ထိုကဲ့သို့သောလက်ရှိသေနတ်လက်နက်ခဲယမ်းအတွက်အသုံးပြုသည်အဘယ်အရာကိုအဖြစ်သန့်စင် smokeless အမှုန့်ပေါက်ကွဲသဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည် 18 ရာစုအကုန်အသုံးပြုပုံပေါက်ကွဲရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။
က detonates အခါချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် subsonic အမြန်နှုန်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမဲရောင်အမှုန့်တစ်နိမ့်ပေါက်ကွဲအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ အမြင့်ပေါက်ကွဲ, စာချုပ်အသုံးပြုပုံဖြင့်အများကြီးပိုအင်အားသုံးအတွက်အသံထက်မြန်အမြန်နှုန်းအဖြစ်တိုးချဲ့ရန်။
Nitroglycerin ဒါဟာအနက်ရောင်အမှုန့်ထက်ပိုအစွမ်းထက်ကြောင်းကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးပထမဦးဆုံးပေါက်ကွဲခဲ့ 1846. ခုနှစ်တွင်အီတလီဓာတုဗေဒပညာရှင် Ascanio Sobrero အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ဓာတုပေါက်ကွဲဖြစ်ပါသည်, Nitroglycerin နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်, ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်များနှင့်က glycerol တစ်ဦးရောနှောသည် ဖြစ်. , ဒါကြောင့်အလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏တီထွင်သူ Sobrero ၎င်း၏အလားအလာအန္တရာယ်များဆန့်ကျင်သတိပေးခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အဲဖရက်နိုဘယ်လ် 1864. အများအပြားလေးနက်မတော်တဆမှုအတွက်စီးပွားဖြစ်ပေါက်ကွဲအဖြစ်မွေးစား, သို့သော်, ဒိုင်းနမိုက်များနိုဘယ်လ်ရဲ့နောက်ဆုံးတီထွင်မှုမှဦးဆောင်ကျယ်ပြန့်တားမြစ်ပိတ်ပင်ခံရဖို့စင်ကြယ်သောအရည် nitroglycerin စေ၏။
သူကမတော်တဆတစ်ဦးချည်ခါးစညျးရှေ့ဖုံးအပေါ်အစွမ်းထက်နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်အရောအနှောဖိတ်နှင့်ကအခြောက်အဖြစ်ခါးစညျးရှေ့ဖုံးပေါက်ကွဲလာသောအခါ 1846 ခုနှစ်တွင်ဓာတုဗေဒပညာရှင်ခရစ်ယာန် Schonbein လည်း guncotton ကိုခေါ် nitrocellulose ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Schonbein နှင့်အခြားသူများအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုလျင်မြန်စွာလုံခြုံစွာကုန်ထုတ်လုပ်မှု guncotton တစ်နည်းလမ်းများထူထောင်နှင့်အနက်ရောင်အမှုန့်ထက်နီးပါးခြောက်ကြိမ် သာ. ကြီးမြတ်စင်ကြယ်သော, ပေါက်ကွဲပါဝါခဲ့သောကွောငျ့, ကလျင်မြန်စွာလက်နက်များအတွက် projectile propelling များအတွက်ကိုဆိုလိုပါတယ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်မွေးစားခဲ့ပါတယ်။
1863 ခုနှစ်, TNT သို့မဟုတ် Trinitrotoluene တို့သည်ဂျာမန်ဓာတုဗေဒပညာရှင်ယောသပ်သည် Wilbrand တီထွင်ခဲ့သည်။ မူလကအဝါရောင်ဆိုးဆေးအဖြစ်ဖော်စပ်၎င်း၏ပေါက်ကွဲဂုဏ်သတ္တိများချက်ချင်းထင်ရှားကြဘူး။ ၎င်း၏ stablity ကြောင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာ shell ကို Case သို့သွန်းလောင်းနိုင်ထိုကဲ့သို့သောကြီးနှင့် 20 ရာစုအစောပိုင်း၌ဂျာမန်နှင့်ဗြိတိန်စစ်တပ်ခဲယမ်းများအတွက်စံအသုံးပြုမှုသို့ရောက်ကြ၏။
မြင့်မားသောပေါက်ကွဲစဉ်းစား, TNT အမေရိကန်စစ်တပ်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ဘုံအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
1865 ခုနှစ်တွင် အဲလ်ဘတ်နိုဘယ်လ် ပေါက်ကွဲမှုဦးထုပ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဦးထုပ် nitroglycerin detonating တစ်ပိုလုံခြုံနှင့်အားကိုးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
1867 ခုနှစ်တွင်အဲလ်ဘတ်နိုဘယ်လ်မူပိုင်ခွင့် ဒိုင်းနမိုက် တဲ့ stabilizer အဖြစ်တစ်ခုစုပ်အဖြစ်သုံးပိုင်း nitroglycerine, တစျစိတျတစျပိုငျး diatomaceous မြေကြီးတပြင် (မြေပြင် silica ကျောက်လုံးကြီး) ၏အရောအနှောများပါဝင်သည်တစ်ဦးမွငျ့မားပေါက်ကွဲနှင့်ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ် antacid ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏ။
ရလဒ်အရောအနှောစင်ကြယ်သော nitroglycerine ထက်သိသိသာသာပိုလုံခြုံခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ပိုပြီးအစွမ်းထက်အနက်ရောင်အမှုန့်ထက်ဖြစ်ခြင်း။
1888 ခုနှစ်တွင်အဲလ်ဘတ်နိုဘယ်လ် ballistite လို့ခေါ်တဲ့သိပ်သည်း smokeless အမှုန့်ပေါက်ကွဲတီထွင်ခဲ့သည်။ 1889 ခုနှစ်တွင်ဆာဂျိမ်းစ် Dewar နှင့်ဆာဖရက်ဒရစ်အာဗေလ cordite ဟုခေါ်တွင်သည်အခြား smokeless ယမ်းမှုန်တီထွင်ခဲ့သည်။ Cordite nitroglycerin, guncotton နှင့် acetone ၏ထို့အပြင်ခြင်းဖြင့် gelatinized တစ်ဦးဓာတ်ဆီပစ္စည်းဥစ္စာများကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဤအ smokeless မှုန်၏နောက်ပိုင်းတွင်မူကွဲအများဆုံးခေတ်သစ်သေနတ်နှင့်အမြောက်တပ်များအတွက် propellant ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
1955 ကတည်းကအပိုဆောင်းမြင့်မားသောပေါက်ကွဲအမျိုးမျိုးတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်အသုံးပြုရန်အများအားဖြင့် Created, သူတို့ကလည်းထိုကဲ့သို့သောနက်ရှိုင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများထဲမှာရှိသကဲ့သို့စီးပွားရေးအရ applications များ, ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောနိုက်ထရိတ်-လောင်စာရေနံရောနှောသို့မဟုတ် ANFO နှင့် Ammonium နိုက်ထရိတ်-အခြေစိုက်စခန်းရေ gels အဖြစ်ပေါက်ကွဲယခုပေါက်ကွဲစျေးကွက်၏ခုနစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း။ ဤရွေ့ကားပေါက်ကွဲအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများအတွက်လာ:
Hyperbaric ကုန်သည်များသမိုင်း - Hyperbaric အောက်ဆီဂျင်ကုထုံး
ကုရုမက်ကော်မစ်သည်စက်မှု Reaper ၏တီထွင်သူ
အဆိုပါ Tampon ၏သမိုင်းအကျဉ်း
'' Wuthering Heights '' ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ 2016 သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေပတ်ဝန်းကျင်ရာထူး
ဂျပန် Speaking သည့်အခါမှန်ကန် "စန်း", "Kun," နှင့် "ချမ်း" ကိုသုံးပါဖို့ကိုဘယ်လို
Pastel ပန်းချီအဆင့်-by-အဆင့် Seascape ဆန္ဒပြ
Godot အဘို့ကိုစောင့်နေကနေ quotes နှင့်အပြင်အဆင်
အဆိုပါတက္ကစီ Cab တိုးတက်မှုဂိမ်း Play လုပ်နည်း
ဂျော်ဂျီယာ O'Keeffe အပေါ်ဓါတ်ပုံပညာနှင့်လွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
DNA ကိုများနှင့် Evolution
အကောင်းဆုံးစကိတ်စီး Pad တက်ဘလက်များသည်
အားလုံးအချိန်ထိပ်တန်း 10 အချမ်းသာဆုံး Talk ကိုပြရန်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်
ပြင်သစ် Adverb Dessus နှင့် Dessous ဖို့နိဒါန်း
"Ah က, je ris က de ငါ့ကို voir" Lyrics နှင့်ဘာသာပြန်စာပေ
Veda Pathshala: အဝေဒ Gurukul System ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း
အဆိုပါအင်္ဂလီကန် / Episcopal ပိုင်းခြေ၏သမိုင်း
Marilyn Monroe, Movies